Bridgewater Homecare | Management Franchise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»Bridgewater Homecare Franchise
Bridgewater Home Care franchise inokupa iwe mukana wekuvaka rako rakabudirira bhizinesi kukurumidza kukurumidza, inogara ichiwedzera musika.
Iva chikamu chemutengi wekutanga wesarudzo yekuchengetwa kwakazvimirira kumba, inyanzvi yeAlzheimer's ne dementia care. " Isu tinopfuurira kumusoro ”
Isu takaringana here?
Bridgewater Home Care chinhu chakasimbiswa-chakagadzirwa chine makore anopfuura masere ezviitiko muhutano nehutano hwemagariro ekuchengetedza. Yakagadzwa muna 8, iyo kambani inotsvaga kuwedzera basa rayo munzvimbo yemusika kuburikidza neineweine simba, inofarira uye yakazvipira franchisees. Iyo mhando yakato wedzera nharaunda yayo yedunhu nenzvimbo nhatu idzo dzakawana budiriro mushure mekuita chirongwa che Bridgewater Home Care modhi. Bridgewater Home Care haisi chete inozivikanwa nehunhu hwekutarisirwa kununurwa, asi yakanakisa mamiriro ekushanda eboka ravo rekutarisira. Izvi zvaka zivikanwa mushure mekunge ongororo yakazvimirira yakaitwa naSmith + Henderson akakwenenzvera Vashandi kugutsikana pa 2010%, nekuwedzera iyo kambani yakawanawo Mubhadharo weGore muE3 Bhizinesi Mabhaso.
Tiri kutsvaga vanhu vanokurudzirwa vanogovana tsika, vanofarira bhizinesi uye vane chishuwo chakasimba chekuita mutsauko munharaunda yenzvimbo nekupa hunhu hwepamusoro hwetariro uye rutsigiro kune vakuru vanotambura mudzimba dzavo. Iwe unogona kunge watobudirira semutungamiri, maneja, nyanzvi, mudzidzisi kana muzvinabhizimusi asi wakagadzirira shanduko uye uchida kuvandudza rako rakabudirira bhizinesi. Kuve Franchise Partner nesu kwete chete kunokupa iwe mukana wekuva nebhizinesi rakavambwa pane mhando ine mukurumbira mukurumbira uye misika inotungamira maitiro, inokupa iwe mukana wekuva nebhizimusi reFrancise iro rinopa kukosha kwakanyanya kwemari.
Iko kudiwa kwemasevhisi edu kunozviratidza. Maererano nemishumo ichangobva kuitika, chikamu chevanhu vane makore makumi masere neshanu zvichidarika chinofungidzirwa zvakapetwa pamakore makumi maviri anotevera, kune vanhu makumi masere nemashanu uye vanopfuura vanhu vese chiuru che "vanoshanda zvetsika". Pakazosvika 85 vanopfuura makumi matatu muzana yehuwandu hwevanhu vachange vari pamusoro pemakore makumi matanhatu nemashanu vachikupa mukana wakakura wekuvandudza bhizinesi rakabudirira.
Mari yekutanga franchise mubhadharo ndeye $ 35,000 + VAT nemari iri kuenda pamwedzi yevhisi ye5% (exc. ​​VAT) neinofungidzirwa kushoma mari inodiwa kuve $ 80,000, inosanganisira yekutanga franchise mubhadharo.
Mari inowanikwa kuburikidza nemabhangi makuru kana kuburikidza neyechitatu mapato. Isu tinofara kukurukura dzakasiyana siyana dzemari sarudzo newe uye tinokuzivisa munzira chaiyo. Isu tine hukama hwakanaka nevemabhangi uye nemamwe masangano emari kukubatsira iwe kuti uwane mari inodiwa.
Chii chaunowana pakudyara kwako?
Bridgewater Home Home Care inokupa iwe zvese zvaunoda kuti utange, kushanda uye kuvaka bhizinesi rakabudirira.
Muenzaniso bhizinesi rakaedzwa-uye-rakayedzwa - Bhurukwa rekubudirira kwako.
Kutanga uye inoenderera pakadzika-kudzidziswa uye kutsigirwa.
Dunhu rako muUK.
Webhusaiti uye kushambadzira chimiro.
Bhuku rakazara rekushandisa.
Policies uye Maitiro ekusangana uye kupfuura CQC zvinodiwa.
Kushanda Bridgewater Home Care franchise hakungopi mibayiro yemari chete asi kunogona kukupa hukuru hwekugutsikana kwebasa. Iwe unogona kuve nekushanda nehupamhi hwemasangano uye nevanhu vane akasiyana siyana nematambudziko uye anodiwa. Iwe unenge uchibatsira vamwe munharaunda yako yemunharaunda nekupa basa rakanaka kwazvo, rakaringana. Hakuna kumbove neyakaomesesa nguva. Bridgewater Home Care ikambani yakakura-yakakura UK inoshanda uye inoshanda kambani ine mhando yakagadzirirwa yakanangana neiyo UK yekutarisira musika, saka iwe unoziva kuti bhizinesi rako richanyatsoiswa munzvimbo yekubudirira.
Bridgewater Home Care ine yakatsanangurwa system ine anopfuura makore masere ruzivo uye inozivikanwa uye inoremekedzwa zita remhando. Unogona kuvimba kuti uri kuita mari mubhizinesi remhando nekureba uye kugona kukuru. Iwe haumbofi uri wega, isu tinogara tiripo kuti tikutsigire, kugovera maitiro akanaka uye kukunda chero matambudziko. Iwe une mukana wakakura wekuwana mari yakawandisa nekuita izvo zvaunofarira nekuzviita nemazvo. Uyu mukana unowana chiyero pakati pemibayiro yemagariro uye kudzoka kwemari.
Tinotarisira kukugamuchidza iwe kune Bridge Bridge mhuri.